Nanety ny lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
nanety ny lalao
Rahoviana ny daty, antoko, lavitra na fandraisana, tsy maintsy mijery tonga lafatra. Izay fomba tianao amin'ny anton'ilay hetsika? Ampio mahita azy araka ny tokony ho maimaim-poana amin'ny aterineto stowage lalao Barber. Play azy mora, fa tena mahafinaritra. Afaka ho tonga ny tompon'ny ny Salon, ary vahiny tsirairay mba hisafidy taovolo tany am-boalohany, na manapaka alika sy saka, izay anao amin'ny maro. Mahaliana ny hizahanao toetra ny tànany amin'ny endrika kanto, mandray anjara amin'ny fifaninanana ny hairdressers. Nahazo ny tsara indrindra, famoronana tompony, ary ny tsara indrindra ianao dia afaka ny ho tsara ange fa dia hahazo mari-pankasitrahana tsara-mendrika.
Salon amin'ny volom-biby
Wedding Hairdresser ho an'ny Princesses
Baby Baby Talking Salon volo
Pou hoharatany Time
Perücken Perücke Perücke
Audrey ny Glamorous Real Haircuts
Fandram-bolo 7 faharoa
Mpanety volom-panambadiana Elsa ho an'ny andriambavy
Salon volom-borona landihazo
Fanamby volo Princess Crazy
Fetim-bolo tena izy amin'ny fetin'ny fahavaratra
Taovolo firy Eliza E Girl
Taovolo chic an'ny ririnina Annie
Taovolo vaovaon'i # Jessy Taona Vaovao Jessie
Taovolo majika zazavavindrano
Taovolo mihaja an'i Audrey
Volom-bolo tena lamaody frantsay
Gothic Princess tena volo tena izy
Volo tena an'i Noelle
Haircuts tena izy any Natalie's Boho
Volo tena volo Olivia
Haircuts tena mpanjakavavy Snow
Haircuts tena izy Moody Ally
Volo tena mamy an'i Vixy
Volo tena tovovavy Galaxy
Taovolo Cyberpunk 2200
Latina tena volo andriambavy Latina
Fomba fihety volo mihomehy biby fiompy
Lalao Mpanety tamin'ny Category:
Farany nanety ny lalao
Lalao Online Rehetra Nanety ny lalao ho an'ny ankizivavy
ny zava-miafina ny Chic bolo
Raha manana volo, noho izany dia tokony ho napetraka. Ny tovovavy mandoa manokana ny volo, miezaka ny mamorona avy amin'izy ireo ny taovolony izay manasongadina maha, ho tsy toy ny bridesmaids. Ao amin'ny Mazava ho azy fa misy fomba rehetra sy ny fitaovana ampiasaina sy ny varnishes gels, loko sy ny fandokoana shampoos, curling vy sy straighteners. Ny sasany dia nandevozin'ny fa hanova tanteraka isan-kerinandro ny sary repainting volo hafa loko sy ny shading kofehy tsirairay, nanapaka ny volony, na tonga isaky ny taovolony vaovao. Fa fampahafantarana izany fepetra lavidavitra kosa, dia aza adino fa manintona nampiofanina, mamirapiratra mbola volo na inona na inona. Lokoy maina ka hahatonga azy ireo ho mora miparasaka, maina, tsy manaiky hofehezina, mifanizina, mety hianjera avy amin'ny clumps manontolo, dia very ny voajanahary hamirapiratra sy ny fomba tsy mendrika, dia mijery ny ho misavoritaka sy nihazakazaka. Fa izaho efa tsy nitranga ho anao, dia tsara indrindra handemana kely fanandramana hafanam-po sy ny mandoa vola bebe kokoa amin'ny sakafo sy ny moisturizing volo, ka dia manintona foana.
Aoka ho foana ny eo an-tampony ny lalao milalao ao Barber
Lalao mpanao volo ho an'ny tovovavy mampianatra ny tanora ny fomba hikarakarana ny volo, ary hanolotra lesona amin'ny fanodinkodinana malemy fanahy, ary hijery tsara tarehy, ka tsy mba ampitondraina tena ratsy. Virtoaly efitra tsirairay dia manana fitaovana maro izay ho ilaina ny mamorona vokatra tsy mampino. Alohan'ny ny famoronana fiovan'ny chords, dia zava-dehibe ny mahafantatra fa ny volo no azo antoka fa ho madio. Samy manana ny karazana volo shampoos ary tsy maintsy mamaritra ny karazana mba araka ny tokony ho ny fividianana. Mazava ho azy, nandritra ny lalao ho an'ny ankizivavy mpanao volo Nuance ity dia tsy kilalaon-, fa ny vaovao mahasoa ho anareo. Ankoatra izany, raha ny volo no hosasana amin'ny rano mafana, dia tsy maintsy mampiasa-javatra mampahalefaka volo ho lasa silky, mankatò sy tsy herinaratra avy amin'ny tohotra. Indray mandeha isan-kerinandro dia ilaina ny mampiasa ny saron-tava, izay mamelona ny volo takamoa sy hampitonena ny loha. Rehefa tanteraka ny fampiasan-tena, ny tena zava-dehibe manakatona fotoana. Tamin'ny dingana ity, ny sasany mampiasa gels manokana izay taovolony no tsara indrindra foana, ny hafa mampihatra varnish sy hanatratra fahombiazana toy izany koa. Ny sokajy ny lalao ho hitanao maimaim-poana mahazatra endrika mpanao volo, eo dia izao:
Pop kintana sy ny sarimihetsika,
Monster sekoly High mpianatra,
sy ny matoatoa.
tsirairay avy izy ireo manaraka ny ny ny endriny, ary tsy maintsy miezaka mba hampifaliana, ka dia izy teo faly. Eo amin'ny sehatry ny asa fanompoana tsara indrindra ihany no velona mpanakanto, satria ny clientele dia mitombo noho ny tsara famerenana. Tsy maintsy ho afaka hamorona tsy noho ny andavanandro styling fiainana andavanandro, fa koa mba hamorona fety bolo, mba mamorona ary hanolotra hevi-baovao ny mpanjifa dia gaga ny sainao. Jereo ny tolo-kevitra izay efa noforonina ho anao sy napetraka amin'ny lalao maimaim-poana mpanao volo. Dia ho ny iaingana, ianao no sendra eo amin'ny heviny sy hanampy hampitombo ny talenta stylist. New Year no manakaiky, na ny andro Patrick, Halloween na nikasa fampakaram-bady - taovolony rehetra manana ny toetra sy tsy mety afa-tsy amin'ny toe-javatra sasany. Tsy hadino sy lalao mpanao volo ho an'ny biby, satria ny kely tia namana koa mba hanehoana eny hihety volo vaovao na styling. Fa alika miteraka namorona ny dikan, fa raha hanitrika ho amin'izao tontolo izao ny Fantasy, tsara tarehy ombimanga nanolotra tamim-pifaliana ny volo ho anao niasa, ary voaravaka ny pigtails mifatotra rambony nametraka bangs niova loko, ary nampifangaro miloko nahatsiravina, barrettes ary nameno sequins.